Dowlada Ingiriiska oo u ballanqaaday kaalmo lacageed Soomaaliya kadibmarkii ay maanta booqdeen Muqdisho madax ka socotay Britain
Updated About:229 days ago 0
Dowladda Britain ayaa ku sheegtay inay 38-milyan oo Pound oo lacagta Ingiriiska ah ku kaalmeyneyso dowladda cusub ee Somalia si wax looga qabato dhinacyada ammaanka, horumarinta adeegyada bulshada iyo cadaaladda, kaddib markii wafdi ka socda dowladda Birtain ay Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Wafdigan ayaa waxaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud iyagoo ka wadahadlay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dale ee Soomaaliya iyo Britain.
Kulankan oo markii uu soo dhamaaday shir jaraa’id ay qabteen labada dhinac ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in wafdiga maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho ay kawada hadleen sidi loo garab istaagi lahaa dowladda cusub ee hada Soomaaliya ka hana qaaday.
Wuxuu sheegay Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in wasiirada ay balan qaadeen inay taageero siinayaan dowladd dalka Soomaaliya.
Wasiirada maanta Magaalada Muqdisho soo gaaray ayaa waxa ay kala yihiin Wasiirka arimaha Africa ee dowladda Ingiriiska Mark Simos iyo sidoo kale Wasiirada horumarinta caalamiga ee Dowladda Ingiriiska justic gringin iyaga oo dhamaantood balan qaaday taageerada inay siinayaan dowladda cusub ee dalka Soomaaliya.
Xasan Sheekh tan iyo markii lasoo doortay waxaa magaalada Muqdisho soo gaaraye wafuud heer caalami ah kuwaasi oo balan qaadyo usamaynaye dowladda cusub ee dalka Soomaaliya.